Filtrer les éléments par date : dimanche, 22 novembre 2020
dimanche, 22 novembre 2020 20:58
Niampy iray ireo nindaosin'ny fahafatesana
Mahatratra 251 ankehitriny ireo olona matin'ny Covid-19 hatramin'ny nidiran'io aretina io teto Madagasikara. Olona iray no maty teo anelanelan'ny 14 novambra sy 18 novambra 2020.
Miisa 31 ireo olona vaovao mitondra ny otrikaretina tamin'ireo 742 nanaovana fitiliana. 65 ireo sitrana, ary 433 ireo manaraka fitsaboana.
Nasiana fanavaozana sy fanarenana ireo foto-drafitrasa eny Antsahatsiroa, tanàna ambony eto Antananarivo.
Voakasik’izany fanavaozana sy famerenana izany ny lalankely, ny tohatoha-bato, ny vahavahady miisa 3, ary ny toerana fanasana lamba. Nasiana jiro manazava ihany koa teny an-toerana.
Vita ny asa Tafiditra anatin’ny tetik’asa « Revalorisation du Quartier Historique d’Antsahatsiroa » izy io, ary notokanana ny 20 novambra 2020.
Namatsy ara-bola ny tetik’asa ny masoivoho frantsay.
dimanche, 22 novembre 2020 16:39
Anosizato-Antananarivo : Fianakaviana sahirana miisa 150 nisitraka fanampiana
Nanome tolo-tanana ho an’ireo fianakaviana sahirana miisa 150 tetsy amin’ny Boriboritany fahaefatra ny orinasa STAR sy ny “Fondation Coca Cola” izay nisy fiaraha-miasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny 20 novambra 2020.
Ny anton'izao fanampiana izao dia fitsinjovana ireo renim-pianakaviana sahirana eny anivon’ny Fokontany sy noho ny fisian’ny valan’aretina Covid-19.
dimanche, 22 novembre 2020 16:30
Ankadilalampotsy-Ankaraobato : Lehilahy iray, Maitre boxe savate, maty voatsatok’antsy
Vatana mihoson-dra, efa tsy misy aina intsony no hitan’ny olona androany maraina, nivalapatra teo amin’ny arabe rarivato teny Ankadilalampotsy, Kaominina Ankaraobato, Antananarivo Atsimondrano.
Nahitana dian-javamaranitra ny faritry ny tendany, izay heverina ho nitarika ny fahafatesany.
Monina eny Antsahasoa, kartie eny manodidina i Maitre Bary, ilay namoy ny ainy, anarana ahalalan’ny olona azy, indrindra ny tanora. Mpitaiza tanora amin’ny fanatanjahantena rahateo ny tenany, Maitre « boxe savate ».
Mbola anatin’ny tanjaka i Maitre Bary, ary tsy mahatohitra azy raha mbola telo aman’efatra no manao angaredona aminy, fa mety tampoka taminy ny fanafihana azy.
dimanche, 22 novembre 2020 16:29
Ady amin’ny kere any Atsimo: “Ambony dia ambony ny fanamby miandry antsika”, hoy Ntsay Christian
Nidina ifotony nijery ny zava-misy sy ny dingana efa vita any Amboasary atsimo ny delegasiona tarihin’ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian. Nanambarany fa : “ambony dia ambony ny fanamby miandry antsika raha ny ady amin’ny kere aty Atsimo no resahina”.
Mahakasika ny fanampiana ireo olona tratry ny fahasahiranana, dia hapetraka ao Amboasary ny « Centre opérationnel de coordination » izay ho eo ambany fitarihan’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ary homena fitaovana sy teti-bola mifanaraka amin’izay filàny izay.
Io foibe io no hibaiko sy handrindra ny asa rehetra izay atao ao amin’ny Distrikan’Amboasary. Hanana solontena ao anatin’izany ireo mpiara-miombon’antoka sy ireo ratsa-mangaikan’ny fitondrana.
Jerena mandritra izao dian’ny delegasiona izao koa ny toerana hametrahana ny CRNM na Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale, izay hiasa mandavan-taona, ary hasiana “Banque alimentaire” eo akaikiny. Io “banque alimentaire” io dia toerana natokana hametrahana sakafo, hanampiana ireo izay ianjadian'ny olana ara-tsakafo rehefa main-tany.
Afaka manatona io CRNM io ihany koa mandavan-taona, ireo olona misedra fahasahiranana ara-tsakafo.
Ankoatra an'Amboasary dia hapetraka ao Ambovombe, Tsihombe, Beloha, ary Ampanihy ny CRNM.
dimanche, 22 novembre 2020 14:35
Ramala – Ankazobe : Hametrahana toeram-pialantsasatry ny mpampiasa ny lalam-pirenena faha-4
Andalana ny fanorenana toeram-pialantsasatry ny mpampiasa ny lalam-pirenena faha-4 ho fiarovana ny mpampiasa lalam-pirenena ary fampihenana ny lozam-pifamoivoizana.
Ao amin'ny toerana atao hoe : Ramala, Fokontany Ambohinaorina, Kominina Kiangara, Distrika Ankazobe, Faritra Analamanga, RN4 PK 179, no hisy azy ity.
Hametrahana ny "Brigade Routière Spéciale (BRS)" an'ny Zandarimaria ihany koa eo, ary natao ny 20 novambra 2020 ny fametrahana ny vatofototry ny asa fanorenana ny foto-drafitrasa ho amin’izany.
Hisahana ny fiarovana ny lalam-pirenena faha-4 manomboka any Talatamaty ka hatrany Maevatanana, izay tsapa tato ho ato fa anjakan'ny asan-jiolahy matetika ity BRS vao naorina ity.
dimanche, 22 novembre 2020 14:23
Vahaolana vonjimaika ny kere : Napetraka ao Beloha ny “Kaly Tsinjo”
Nitarika delegasiona tao amin’ny Distrikan’i Beloha - Faritra Androy, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christiana ho fijerena ny zava-misy sy ny dingana efa vita ary fitondrana vahaolana vonjimaika, fohy ezaka ary lavitr’ezaka ho famahana ny olana amin’ny fisian’ny hanoanana mitarazoka na kere.
Napetraka ao Beloha ny “Kaly Tsinjo”, ary ezahina hiparitaka manerana ireo Kaominina rehetra mandrafitra ny Distrikan’i Beloha izany.
“Fanampiana vonjy maika ho an’ireo izay tena sahirana ihany izao nentinay izao, fa mbola hisy fandaminana hafa apetraka, indrindra fa ny vahaolana ho lovainjafy ka hiteraka fampandrosoana amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny sehatry ny fanabezana, ny fahasalamana, ny rano ary ny fametrahana fotodrafitrasa maro”, hoy ny Praiminisitra.
dimanche, 22 novembre 2020 13:16
Firarazana RN4 : Namoy ny ainy ny mpamily, mpandeha telo hafa naratra mafy
Nisehoana tranga lozam-pifamoivoizana fiara fitateram-bahoaka teo amin'ny lalam-pirenena faha-4, teo amin'ny toerana atao hoe : Firarazana, Kaominina Ankazobe, Faritra Analamanga, ny sabotsy 21 novambra 2020 tokony ho tamin'ny 02 ora tolak'andro.
Nivoaka ny lalana ilay fiara Sprinter avy any Mahajanga, nikasa hiazo an'Antananarivo, ka nivadibadika ary simba.
Namoy ny ainy ilay mpamily sady tompony ; olona telo hafa naratra mafy. Nentina notsaboina eny amin'ny CHRD Ankazobe ireto farany.
dimanche, 22 novembre 2020 13:08
Antoky ny Sehatry ny Asa : Sendika faharoa mijoro eo anivon’ny Antenimierandoholona
Sendika faharoa mijoro eo anivon’ny Antenimierandoholona ny Sendika ASA “Antoky ny Sehatry ny Asa eto amin’ny Antenimierandoholona”, ivondronan’ireo mpiaramiasa toa ny mpikarakara ny trano, mpamily, mpahay lalàna, toekarena, tetipivoarana, serasera, arofenitra, fifandraisana iraisam-pirenena, kajy mirindra sns...
Nomarihana ny Zoma 20 Novambra 2020 ny fanokafana ny asa sendikaly ataon’ny ASA.
Tanjon’ny Sendika ASA ny hampitombo ny traikefan’ny mpiasa rehetra, ary hampahalala azy ny andraikiny sy ny zo mifanandrify amin’izany mba hananan’ny tsirairay fitonian-tsaina maharitra eo am-panatanterahany ny adidy sy andraikitra iantsorohany.
Mpikambana feno ao amin’ny vondrona sendikaly SSM (Solidarité Syndicale de Madagasikara) ny Sendika ASA.
Amin’ny maha Sendika azy dia tsy mandray baiko politika na avy aiza na avy aiza, na avy amin’iza na iza ny Sendika ASA.
dimanche, 22 novembre 2020 13:07
Antsiranana : Nandao antsika alina i Félicienne
Viavy nanolo-tena ho an'ny fampianarana sy ny fanabeazana i Félicienne LOUVEINS, mpikambana mavitrika tao amin'ny KMF/CNOE fanabeazana ny olom-pirenena.
Tsy nahatsiaro reraka nitety ambanivolo jiaby tao Antsiranana, ary nanome tanana ny CNOE tany amin'ny Faritany hafa ihany koa hisian'ny Demokrasia eto Madagasikara.
Niatrika vava basy sy fandrahoanana fanagadrana izy tamin'izany, raha nisy ny natahotra sy nihemotra, i Félicienne lohalaharana nitarika, ary niaro ny rehetra.
Tsy adignanay anao Zoky e, banga ny fanabeazana nilaosanao.
Courage anareo zanany sy zafiny.
Repose en paix Félicienne.
Patrick et toute l'équipe niaraka tamin'izany.
(Sary Félicienne sy zanany Romie)